Guusha Soomaaliya iyo Gudoominta shirka 75-aad ee golaha guud ee Qaramada Midoobay | Somalia News
Wararkii ugu danbeeyay dagaal mar kale dhex-maray ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya & Doorashada Maraykanka oo …
Hirdankii ugu Adkaa oo ka Dhex Socda Brack Obama iyo Donald Trump
October 22, 2020 | Published by: yaska Madacwaynaha Mareykanka Mr Donald Trump, iyo ninkii uu xilka kala wareegay, Ee Barack Obama, ayaa Isku Weeraray Dhaliilo iyo cambaarayn kulul intii ay socdeen isu soo baxyo iska soo horjeeda oo ay qabteen. Isagoo si kulul ugala hadlayay gobolka Pennsylvania taageerayayna musharaxa madaxtinimada ee Xisbiga Dimuqraadiga, ayuu Mr Obama waxa uu Trump ku tilmaamay “adeer wareersan”, isagoo intaas ku daray inuu dhiirigalinayo cunsuriyiinta. Madaxweynaha Jamhuuriga oo ku sugan North Carolina, ayaa isna ku jeesjeesay Mr Obama inuu khalad ka aaminay wixii ka soo baxay doorashadii 2016-kii. Iyadoo 13 maalmood uun ay ka harsan tahay doorashadan, ayaa Mr Biden waxa uu aad ugu horreeyaa aaraa’da guud ahaan dalkaas laga uruuriyay. Hasayeeshee qiyaasta gobiollada qaar ayay musharrixiintan aad isaga ag dhaw yihiin kuwaas oo hadba dhinac u ridi kara natiijada doorashada 3-da Nofeembar. Tiradii ugu badneyd ayaa sanadkan codkooda xilli hore dhiibatay, oo 42 milyan oo qof ayaa codkooda ku dhiibtay boostada iyo si caadi ahba. Muxuu Trump sheegay? Mr Trump ayaa inta badan hubkiisa waxa uu Arbacadii ku aadiyay ninka Aqalka Cad kula tartamaya ee matalaya Xisbiga Dimuqraadiga. Waxa uu sheegay in codbixiyayaasha ay tahay inay kala doortaan “soo kabshada la yaabka leh ee uu wado Trump” ama “qulubka ama welwelka ballaaran ee Biden”. Mr Biden ayaa todobaadkan oo dhan ka maqnaa saaxadda ololaha oo waxa uu isu diyaarinayay doodda madaxtinimada ee habeenka Khamiista ka dhici doonta Nashville, Tennessee, halka Mr Trump uu ku wareegayay gobollada aadka la isugu hayo. Madaxweynaha ayaa weerrar kulul waxa uu ku qaaday Mr Obama, kaas oo saacad ka hor markii ugu horraysay tan iyo shirweynihii bishii Agoosto ay Dimuqraadiyiinta qabsadeen wax ka sheegay ololaha Trump. “Cid si adag ugu ololaysay Hillary Clinton oo aan Obama ahayn ma aanay jirin, sax?” Mr Trump ayaa dadkii isu soo baxa ka qeybgalay u sheegay, kuwaas oo buuqayay markii ay maqleen magaca Hillary. “Aad buu isugu dhexyaacsanaa,” ayuu sii raaciyay Trump. Madaxweynaha ayaa ku daray: “Waxay ila tahay in qofka kaliya ee Hillary habeenkaas ka muruagada badnaa uu ahaa Barack Xuseen Obama”. Mr Trump, oo ah Jamhuuri, ayaa sidoo kale ayaa waxa uu ku jeesjeesay xamaasad la’aanta uu sheegay in Obama uu u hayo ololaha Mr Biden ee Aqalka Cad, kaas oo ku xigeenkiisa ahaa 2009-kii illaa 2017. 2016-kii, Mr Obama ayaa la sheegay inuu cadaadis ku saaray Mr Biden inuu tartanka ka haro si Hillary Clinton ay u tartanto, isagoo rumaysnaa inay haysatay fursad wanaagsan oo ay kaga guulaysan kartay Mr Trump. Sanadkii tegay Mr Obama ayaa sheegay in loo baahan yahay “dhiig cusub” oo horkaca Dimuqraadiga, taas oo si wayn loogu fasiray inuu ula jeeday Mr Biden. Muxuu yidhi Obama? Kaddib weerraro adag uu ku qaaday Mr Trump weliba sida uu ula tacaalay fayraska korona iyo dhaqaalaha, ayuu markan Obama isu soo baxa ka dhacay Philadelphia waxa uu Trump ku dhaleeceeyay farriimaha uu soo dhigo bartiisa Twitterka. Waxa uu sheegay in haddii Mr Biden uu guulaysto, “uusan noqon doonin madaxweyne sida uu rabo u dhaqmo oo qofkii aanan taageerin caaya, ama ku handado inuu xabsiga dhigi doono. Taasna ma ahan hab dhaqan caadi ah oo madaxweyne.” Mr Obama – oo weli ka mid ah xubnaha ugu caansan Xisbiga Dimuqraadiga – ayaa sheegay in codbixiyayaasha aanay u dulqaadanayn hab dhaqan noocaas ah hadduu la yimaado qof qoyska ka tirsan, “malahayga adeer wareersan oo meel uun jooga mooyee”. “Maxay dadku arrintaas ugu cudur daaraan?” ayuu yidh. Waxa uu intaas ku daray: “Habdhaqanka waa muhiim. Dabeecaddu waa muhiim.” Mr Obama ayaa madaxweynaha waxa uu ku weerraray habka uu ula tacaaalay cudurka safmarka ah ee Covid-19: “Donald Trump annagoo dhan cudurka nagama ilaalin karo. Xitaa ma qaadi karo tallaabooyinka asaasiga ah ee uu nafsadiisa ku ilaashan karo.” Ku dhawaad 280 gaari oo taallay meesha la dhigo gawaarida ayaa hoonkooda la yeerinayay, arrintaas oo ay ugu riyaaqayeen habka Mr Obama uu u weerrarayay Trump. Mr Obama ayaa ololaha xiga ee doorashada waxa uu ka gali doonaa gobolka muhiimka u ah doorashada ee Florida, isagoo Sabtida tegi doona Miami halka todobaadka xigana uu ku wajahan yahay Orlando.
Daawo: Masuuliyiinta Gobolka Gabiilay oo Booqday Xulka Kubadda Cagta ee Gobolkaasi
Madaxweyne Mustafa Cagjar Oo Xaniinyo Qabanayaa ONLF & Amarkuu soo saaray
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Madaxweynaha Dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa qoraal saameyn siyaasadeed abuuray maanta soo bandhigay kaas uu ku dhego hadlay ONLF. “Xabbada oo aad joojiso kaliya maaha micnaha halgan siyaasadeed oo nabad ah. Isku dhufashada qabiilada, iska horkeenka shacabka iyo maamulada, u hoggansanaan la’aanta shuruucda iyo nidaamka dawliga ah ee jira waxay baalmarsan tahay micnaha halganka siyaasada. Cid walba oo sifo sharci ah ku halgamaysa way u banaan tahay saaxada siyaasadu. Cid se ka sarraysa sharciga ma jirayso. Cabudhin iyo xadgudub xal maaha; sidoo kale fawdo iyo shacabka oo been loo sheego siyaasad maaha. Madaxweyne Mustafa Cagjar ayaa sidoo kale galabta qoraal soo dhigay bartiisa Facebook uu Amar ku gudbinayo. “Xukuumadu iyadoo tixgalinaysa afkaarta siyaasiga ah ee ururda iyo axsaabta kajirta deeganka, haddana waxay xukuumadu faraysaa in laga maarmaan tahay, in Aan bulshada deeganka ladhax keenin qadiyad Ka hoosaysa Somalinimo. Bulshada Somaliyed waxay u ooman tahay Horumar aqooneed, mid dhaqaale Lama joogo 1991 xilligaas oo qabiil kasta calan samaysa- nayay, Waa inaan si wada jir ah uga soo horjeedsana afkaarta qabaliga ah ee guracan! Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Daawo: Wasiirka Horu marinta Caafimaadka Somaliland oo Cisbitaal Cusub ka dhagax dhigay Boorama
Guusha Soomaaliya iyo Gudoominta shirka 75-aad ee golaha guud ee Qaramada Midoobay
This post first appeared on Allbanaadir.com. Read the https://www.youtube.com/watch?v=om48qmDUO_0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2kQhp-LuJvrukJDzrjK_oTIKdkuU4noSYgCcXL27xVF0u28rxSGFWzaCEoriginal article
Previous articleMercato – Lisandru and Matteo Tramoni in Cagliari
Next articleSomalia: Former PM Meets With Galmudug Leader in Mogadishu – AllAfrica.com
Degdeg: Sacad Al Xariri oo mar kale loo magacaabay Rai’sul wasaaraha Lubnaan
BEIRUT (HALBEEG) – Siyaasiga reer Lubnaan Sacad al-Xariiri wuxuu helay taageero ku filan oo dhanka baarlamaanka , wuxuuna isku dayi doonaa inuu soo dhiso dowlad wax ka qabata dhibaatada ugu xun tan iyo dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay 1975-1990. magacaabista ayaa soo baxday ka dib wadatashiyo uu sameeyey madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun markii ay muujisay in Xariri uu ku guuleysanayo taageerada 47 xildhibaan, taas oo ka badan tirada xildhibaanada ee aan wali si rasmi ah u shaacin mowqifkooda, sida ay ku warrantahay wakaalada wararka ee Reuters maanta oo khamiis ah. Xariri weli wuxuu wajihi doonaa caqabado waawayn oo ay ugu horreyso awood qeybsiga dowladeed ee siyaasiyiinta Lubnaan, iyo soo dhisidda xukuumad loo dhanyahay taas oo wax ka qabato Mushkiladaha uu wajahayo dalkiisa. Dhibaatooyin la degay Lubnaan waxaa kamid ah qiimaha Lacagta oo meel hoose tagay, nidaamka bankiyada, saboolnimada sii kordheysa iyo deymaha curyaamiyay Lubnaan. Sidoo kale Xukumadda Xariiri ayaa looga fadhiyaa maareynta musiibada COVID-19 iyo qaraxii Agoosto gilgilay dekadda Lubnaan oo ay ku naf waayeen 200 oo qof iyo burburka balaayiin hanti ah. Post Views:27 Related Let’s block ads! (Why?)
Guddida Wanaag Farista JSL oo ka Digay Saamaynta ay Baraha Bulshadu ku yeelanayaan Hab dhaqanka Dhallinyaradda
October 22, 2020 | Published by: yaska Guddida wanaag farista iyo Xumaan reebista Somaliland ayaa fariimo wacy’gelin ah u direen guud ahaan dhalinyarada Somaliland. Masuuliyiinta guddida wanaag farista iyo xumaan reebista Somaliland ayaa waxay fariimo wacy’gelin ah u direen guud ahaan bulshada Somaliland, gaar ahaan waalidiinta iyo ubadkooda. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Marood-jeex guddida wanaagfarista iyo xumaan reebista Somaliland Cawl Xuseen, ayaa dhalinyarada ku waaniyay inay ka dheeraadaan waxyaabaha dhibaatada ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka suuban. Gudoomiyaha guud ee guddida wanaagfarista iyo xumaan reebista Somaliland Sheekh Muuse Jaamac Cabdi ayaa soo dhaweeyay hadalkii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay magaalada Burco ee ku saabsanaa in talaabo sharciga la marin doono falkii kusiga iyo dilka ahaa ee ka dhacay magaalada Burco, waxaanuu gudoomiyuhu guud soo jeediyay in laga waantoobo falalka ku xun diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee uu kufsigu ka mid yahay. Gudoomiyaha guud ee guddida wanaagfarista iyo xumaan reebista Somaliland Sheekh Muuse Jaamac Cabdi wuxuu sheegay in baraha bulshadu ay saamayn aan fiicnayn ku yeesheen dhaqankii dhalinyarada iyo waxbarashadoodiiba, waxaanuu ku waaniyay inay dhalinyaradu ka feejignaadaan dhibaatada baraha bushadu ay ku yeelan karaan waxbarashadooda iyo horumarkoodaba.
DEGDEG: Weriye C/llaahi Kulmiye oo goor dhow laga sii daayey Xasbiga NISA
War hadda soo dhacay ayaa sheegaya in weriye C/llaahi Kulmiye Caddow oo muddo shan maalmood ah u xirnaa Hay’adda Nabadsugidda iyo SirdoonkaSoomaaliya la sii daayey goor dhoweyd. Sii deynta weriyaha ayaa la sheegay inay ka danbeysay waanwaan xarigiisa ku saabsan oo oo uu hoggaaminayey Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir, waxaan suuragashay in goor dhoweyd xoriyadiisa dib loo siiyo weriyaha. Ad Ciidamada NISA ayaa xoog ah ku galay Guriga Weriye C/llaahi Kulmiye Caddow, halkaasoo ay kala baxeen 16-kii bishan Oktoobar. Waxaana sarigiisa cambaareeyay mas’uuliyiin iyo ururrada saxafyiinta. Warar Xul ah
Maraykanka Oo Ku Eedeeyey Ruushka Iyo IRAN Inay Farogelin Ku Hayaan Doorashada Mareykanka
October 22, 2020 | Published by: yaska Xafiiska dambi baadhista gudaha Mareykanka ee FBI ayaa sheegay in ay hayaan warar sheegaya in saraakiil Iran iyo Ruush ahi ay ku lug yeelan doonaan doorashada Mareykanka, sida uu sheegay Agaasimaha Hey’addaas John Ratcliffe. Agaasimaha ayaa sheegay in saraakiil Amerikaan ah heleen xog ku aadan in hanaanka diiwaan gelinta doorashada Mareykanka heystaan sirdoonka Russia iyo Iran, xilli doorashada Mareykanka ka harsan tahay 13 maalin oo keli ah. Mr. Ratcliffe, waxaa uu sheegay in sirdoonka Iran oo magaca kale huwan ay Emailo u soo direen codbixiyeyaasha Dimoqraadiga ayagoo abuureya xiisad iyo waxyeeleynta madaxweyne Trump. Isagoo intaas ku daray in xogta codbixinta oo la been abuuray loo ekeysiinayo mid sax ah isla markaana xaalad jahwereer ah keenaysa, taas oo hor seedi karta kalsooni la’aan ku timaada hanaanka dimoqraadiyadda Mareykanka. Agaasime Ratcliffe, ayaa sidoo kale sheegay in aanuu arag saraakiil sirdoonka Russia ka tirsan, laakiin uu aamisan yahay in ay hayaan macluumaadka doorashada Mareykanka ku saabsan. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka waxay sheegeen in hanaanka doorashada Mareykanka uu yahay mid sugan oo lagu kalsoonaan karo,hase ahaatee ma sheegin sida xogtan lagu heley iyo waxa dowladda Russia ka damacsan tahay faragelinta doorashada Mareykanka. Laamaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in 2016 Kremlin uu farageliyay doorashada Mareykanka ka dib markii loo dhacay xogaha doorashada Mareykanka lana carqaladeeyay murashaxnimada Hillary Clinton. Hase yeeshee Iran wali uma suurtagalin in ay xadaan xogaha doorashada Mareykanka. [embedded content]
Updated on October 22, 2020 1:51 pm